Sidee loo sameeyaa hickey: habka ugu fiican ayaa ah qoorta? | Ragga Stylish
Xaqiiqdii intaad nooshahay waxaad ahayd / waligaa hickey. Waxay dhahaan hickey khatar ayuu ku noqon karaa bulsho ahaan iyo caafimaad ahaanba haddii aadan aqoon sida loo sameeyo si sax ah. Waxaa loogu yeeraa nibbles aan waxba galabsan oo qoorta ku yaal, laakiin ma jiraan wax aan waxba galabsan haddii qofka sameeyaa uu ku dhammaado inuu ku waxyeeleeyo Tusaale ahaan, waxaa jira kiis 17-sano jir ah kaasoo Wuxuu u dhintay hickey saaxiibtiis siisay 24 sano. Sababta ayaa ahayd xinjirowga dhiigga ee gaara maskaxda wuxuuna sababay istaroog dilaa ah.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan ka hadlaynaa sida loo sameeyo hickey sax ah. Sidan oo kale, waxaan ku gaari karnaa ujeeddada dhabta ah ee ficilkan. Waxaad rabtaa inaad waxbarto sida loo sameeyo hickey? Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska 🙂
1 Hickey, fad a?
2 Waa maxay oo halkee lagu sameeyaa hickey?
3 Tallaabooyinka lagu sameeyo hickey
3.1 Ogolaansho weydiiso
3.2 Ka fikirida sababta aad u rabto inaad sameysid hickey
3.3 Si tartiib tartiib ah u soco oo dooro goobta
3.4 Faruuryaha waxyar ku faafi oo mari maqaarka
3.5 Nuug maqaarka oo si jilicsan u dhammee
Hickey, fad a?
Markii hore, waxay ahayd wax aad u caadi ah in la fiirsado wiilasha iyo gabdhaha yar yar oo isku dayaya inay qoorta ku xirtaan hickey qoorgoodii uu sameeyay lamaanahoodu Si kastaba ha noqotee, waqtigan xaadirka ah waxay umuuqataa taas dadku hickey ma sameeyaan sidii hore mana u calaamadeyneyso dhul si isku mid ah. Tani waa macquul in laga fekero in hickey uu sidoo kale ka mid ahaa moodooyinka badan ee bulshada. Waxaad dhihi kartaa hadii aad hesho hickey maalmahan waa mid duug ah.
Xaqiiqadani waxay ahayd dariiq lagu calaamadiyo dhulka ka hor tartamayaasha kale. Ragga iyo dumarka labadaba, waxay muujisay in qofkani horeyba xiriir ula lahaa qof ayna ahayn inay iyagu is taabtaan. Waxaa la dhihi karaa waxay ahayd si la mid ah eey ku kaadiso meelaha si ay u calaamadeyso dhulkeeda.
Waa maxay oo halkee lagu sameeyaa hickey?
Kuwa idinka mid ah ee aan aqoon waxa loo yaqaan 'hickey', aan u sharaxno. Waa soo jeedin. Tani waa waxa loo yaqaan nabar loo yaqaan 'schimosis'. Waxaa sababa nuugista maqaarka oo abuura nabar ka dib dhunkashada daran ee maqaarka. Waxay dhacdaa inta lagu jiro dhacdooyinka ficil galmo waalan oo lagu soo oogay damac labada dhinac ah.
Badanaa waxaa lagu sameeyaa qoorta, in kasta oo ficil ahaan lagu samayn karo meel kasta oo jidhka ah. Halkee jirka laga sameynayaa waxay kuxirantahay gabi ahaanba xawaaraha iyo awooda xiriirkaas waqti xaadirka ah. Guduudka iyo calaamadda hadhay waxay qaadan kartaa dhowr maalmood in la waayo. Marka hore, sida ugu dhakhsaha badan ee loo sameeyo, waa casaan midabkeedu yahay sababo la xiriira jabitaanka marinnada dhiigga ee maqaarka hoostiisa. Waqtiga ka dib wuxuu noqdaa mid madow, guduud, buluug, cagaar, oranjo iyo jaalle ah. Isugeyn waxay socon kartaa ilaa 15 maalmood.
Tallaabooyinka lagu sameeyo hickey
Markii aan ogaanno waxa ay tahay iyo halka uu sida caadiga ah ugu dhaco, aan aragno sida loo sameeyo hickey. Waxaan falanqeyn doonaa talaabo talaabo.
In kasta oo ay u muuqato wax lala yaabo, weydiiso rukhsad markan way kafiican tahay cafiska. Qofka aad u siineyso hickey-ga ayaa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo dadweynaha hortiisa ama uu dhibaatooyin kala kulmo haddii dadku arkaan. Sidoo kale, aad ayey muhiim u tahay haddii xiriirka qarsoodi laga dhigo. Sidaa darteed, way fiicantahay inaad weydiisato qofka kale rukhsad inuu ku siiyo xaqiijin. Waa laga yaabaa inay "gooyso kubbadda" laakiin waa ka daacad iyo faa'iido badan tahay.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo codsado. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad weyddiisid inta aad wax ka yeeraysid ama aad ka dhunkaneyso dhagteeda agteeda.
Ka fikirida sababta aad u rabto inaad sameysid hickey
Way cadahay in waqtigan xaadirka ah inaadan si fiican madaxa ugu fikireynin. Si kastaba ha noqotee, waa muhiim inaad istaagto oo aad ka fikirto sababta dhabta ah ee aad u rabto inaad qofka kale u siiso hickey. Hickey-ga ayaa wali ah calaamado galmo oo socon kara ilaa 15 maalmood. Waa inaad ka fikirtaa inay u qalanto iyo in kale.
Caadi ahaan, hickeys ma laha fikir badan. Iyagu waa daqiiqado rabitaan saafi ah iyo xamaasad leh halkaas oo aan laga soo kabsan karin uu sameeyo ama sameeyo fikir la'aan. Markaad qofkaas siiso hickey, waxaad muujineysaa inay iyagu yihiin oo adigu kaligaa tahay.
Si tartiib tartiib ah u soco oo dooro goobta
Si hickey uusan u dhaawicin, laakiin uu u helo raaxo, uma baahnid inaan si toos ah ugu aadno barta. Waxaa fiican inaad si tartiib tartiib ah u sii dhunkato ilaa aad ka gaarto meesha aad dooratay inaad ku sameyso. Maskaxda ku hay in hickeys waxay waxtar badan u leeyihiin meelahaas maqaarku ka khafiifsan yahay. Tusaale ahaan, qoorta waa aag aan lahayn lakab muruq ah xididdada dhiigga ayaa goor hore la gaari karaa. Maqaarka xusulka iyo gacmaha hoose, ama bawdada gudaha ayaa waliba ah meelaha ugu wanaagsan.
Haddii qofka aad la socotaa uu yahay mid xishood badan oo aan rabin in la dareemo, raadi meel ay tegi karaan iyadoo aan laga warqabin. Haddii aad timo dhaadheer leedahay, dhabarka qoorta waa fikrad fiican.
Faruuryaha waxyar ku faafi oo mari maqaarka
Si aad si sax ah u sameyso, waa inaad afka u dhigtaa sidii inaad rabto inaad sawirato O ama eber. Marka qaabka la doorto, bushimaha ayaa la saaraa maqaarka waxaana la hubiyaa inaysan jirin wax banaan oo hawadu ka baxeyso.
Nuug maqaarka oo si jilicsan u dhammee
Ilkaha waa inay ka fogaadaan si aysan u dhaawicin. Nuujinta waa inay socotaa 20-30 ilbiriqsi si loo bilaabo calaamadaha ka tagaya. Ka fikir taas oo laga yaabo inaad waqti yar haysatompo nabarku wuu muuqdaa. Waa inaad si tartiib tartiib ah u socotaa illaa aad ka aragto in summaddu halkaas joogto.
Waa muhiim in la xakameeyo qadarka candhuufta. Waxaa ugufiican in candhuuf lagu liqo nuugid kasta. Sidan ayaan uga fogaaneynaa inaan uga tagno qofka kale isagoo caajis badan. Furaha ayaa ah in si adag wax loo dhuuqo si ay xididdada maqaarku u jabaan, laakiin ma ahan inay ku adkaadaan inay wax yeelaan.
Ugu dambeyntiina, waa inaad dhammeysaa dhunkashada qofka si aysan u noqon mid aad u qallafsan. Naxariis iyo xamaasad ayaa ah dareenka ay tahay inuu ku guuleysto ficilkan.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkan aad ku calaamadeyn karto dhulka ama aad ku raaxeysan karto hickey wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo sameeyo hickey